About Us - Nanjing Jianke milina Co., Ltd
Nanjing Jianke milina Co., Ltd efa nivoatra tsikelikely ao anatin'ny anankiray amin'ireto ambony ny milina mpamatsy fitaovana orinasa eto amin'izao tontolo izao. Naorina tamin'ny 1993, dia mifantoka amin'ny mpanamboatra JIANKE Swiss-karazana lathe mandeha ho azy ho an'ny famokarana ny kely, sarotra sy marina tsara metaly singa rehetra ny fotoana.
Mandraka ankehitriny, isika dia manana karazana Soisa telo-karazana lathe mandeha ho azy, Z andian-dahatsoratra, M andian-dahatsoratra sy W andian-dahatsoratra, izay mety fahafaham-po ny filàna iraisam-pirenena avy amin'ny saha: aerospace, ara-tafika, ara-pitsaboana, Auto toko, sns.
JIANKE milina rehetra dia miorina amin'ny teknolojia farany indrindra sy ny singa, toy ny ampela bearings, hitari-dalana lalamby sy ny servo Motors dia mivantana avy eo ambony mpamatsy malaza. Mandatsaka am-pandriana sy ny singa no machined ny amin 'ny orinasa mba hahazoana antoka tsara kalitao.
JIANKE mikiry ny tanjona ny "hanenjika tsara vokatra, manompo maneran-tsena". Ny injeniera mikatsaka ny hanatsara ny milina fahombiazana, milina marina tsara sy ny milina fiarovana. Fampiharana injeniera dia nanolo-tena ho manampy ny mpanjifa hahita ny tandrify eny-ny-talantalana na fomba amam-panao voaendrika JIANKE CNC vahaolana mba hanafaka milina famokarana fahombiazana ambony indrindra sy ny vola-tahiry.
Miorina amin'ny ny fandraharahana filozofia ny "toetra voalohany, laza voalohany", dia nanolo-tena JIANKE manome azo itokisana ny vokatra, fanompoana tonga lafatra, matihanina vahaolana.
Adiresy: No.72, Fengshan Road, Gaochun Economic Development Zone, Nanjing, Sina